Sava raara onwe ya nye: otu esi ahọrọ ihe ziri ezi maka ikpe gị | Site na Linux
Isaac | | Ndị ọzọ
,Ntanetị, dị ka ị si mara ya, yana websaịtị niile na ọrụ ya, abụghịkwa ọfụma. Ọ bụ ihe a na-ahụ anya ma achọta ya kwadoro na sava. Na, dịka ị gaghị ahapụ ihe dị oke ọnụ ahịa ebe ọ bụla, ị gaghị eleghara ebe ị nọrọ webụsaịtị gị. Ya mere, ị kwesịrị ịmara ezigbo sava raara onwe ya nye ebe ahụ.
Enwere ọtụtụ raara onwe ha nye ihe nkesa, na ọtụtụ ọrụ na ọkwa dị iche iche. Nke ahụ na-eme ka nhọrọ ahụ sie ike, yabụ ị kwesịrị ịmara nkọwa niile iji nwee ike ịhọrọ nke kachasị mma maka ikpe gị ma wee si na ya nweta ọtụtụ ...
1 Gịnị bụ raara onwe ya nye sava?
1.1 Bochum raara onwe ya nye na sava raara onwe ya nye
1.2 Mkpa nke mgbanwe dijitalụ
1.3 Uru na ọghọm ya
1.3.1 Yabụ m ga-ewe onye nkesa ihe nkesa?
2 Otu esi ahọrọ ihe nkesa raara onwe ya nye
2.1 Mkpa nke GDPR
Gịnị bụ raara onwe ya nye sava?
Mgbe ị na-ahọrọ nnabata, ma ọ bụ nnabata, mgbe ịchọrọ oghere na igwe ojii iji bulite ibe weebụ / ọrụ, otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị bụ ịmata ihe raara onwe ya nye ihe nkesa na-. Inwe nke a doro anya dị oke mkpa ịhọrọ ụlọ ọrụ kachasị mma na ọrụ nnabata web, na-enye ohere iche na njikwa ka mma nke ebe nrụọrụ weebụ gị.
Sava raara onwe ya nye bu nhọrọ zuru oke ma na-ekewaghị ekewa maka ndị mmadụ, freelancers na ụlọ ọrụ na-achọ nnabata web. N'ihi nke a, ha abụrụla otu n'ime usoro kachasị achọ taa.
O doro anya na ọ nwere ike ịdị ka nke a nnkesa nkesa, ma ọ bụghị. Na ihe nkesa a na-akọrọ, otu ihe nkesa ahụ na-akọrọ ọtụtụ ndị ahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, saịtị ndị ahịa ahụ niile na-eji otu ngwaike ngwaike na otu kọmputa.
Ikekọrịta sava weebụ nwere ike ịdị mma maka saịtị ụfọdụ na-eri obere ihe onwunwe nakwa na ha dị ntakịrị. Mana ọ bụrụ na ha etolite ma ọ bụ buru oke ibu, nhọrọ kachasị mma bụ ịnweta sava weebụ raara onwe ya nye. Nke ahụ bụ, nke ejiri ihe nkesa ma ọ bụ igwe rụọ ọrụ naanị na otu akaụntụ, na-enwe ike ịnụ ụtọ ihe niile enyere.
Iji ihe omuma mepere emepe, ihe nkesa raara onwe ya nye ga-adi ka ịgbazite ulo nye onwe gi, ebe ihe nkesa gha adi ka inwe ulo ndi ozo.
Ka ọ dị ugbu a, ọdịiche dị n'etiti ihe nkesa na nke raara onwe ya nye gbanwere, ebe ọ bụ na ọdịdị nke VPS (Mebere Onwe Server), ihe emere bụ iji otu sava ahụ maka ndị ahịa niile, dịka ndị ekekọrịtara, mana yana uru nke onye raara onwe ya nye site na ịnabata ọrụ ọ bụla nwere onwe ya na igwe arụmọrụ.
Typesdị ọrụ ndị a bụ ihe a na-ahụkarị taa. Ha na-enyere nnukwu ụlọ ọrụ data ịkọrọ ndị ahịa nnukwu ihe igwe. Nke mere na onye ọ bụla nwere nke ha ohere mebere Karịsịa, ya na akụ ya nke vRAM, vCPU, nchekwa nchekwa, ihe ntanetị ntanetị, wdg. Nke a na-emekwa ka o kwe omume ịgbasa ọrụ ahụ ma nweta akụ karịa ma ọ bụrụ na achọrọ, na-enweghị ịgbanwe sava anụ ahụ.
Na mgbakwunye, ha na-ewetara onye ọzọ mgbakwunye uru, ma ọ bụrụ na ihe mee otu n'ime VPS ndị ahụ, ọ gaghị emetụta ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ, ọ bụ ezie na ndị ahịa niile na-eji otu igwe ahụ (ihe nkesa), yana VPS akụrụngwa nkewa iji nweta ọtụtụ sava ndị na-arụ ọrụ dịka igwe kwụụrụ onwe ha, na oke ha nke akụrụngwa, sistemụ arụmọrụ, ngwanrọ, wdg. .
Bochum raara onwe ya nye na sava raara onwe ya nye
Oge ụfọdụ, ụfọdụ ndị ahịa nwere obi abụọ ma ọ bụ otu raara onwe ya nye Bochum na sava raara onwe ya nye. N'ezie, mgbe enyere gị otu ma ọ bụ nke ọzọ ọrụ, ha na-ezokarị aka n'otu ihe ahụ, a na-eji ya eme otu ihe.
Otú ọ dị, ee anyi siri ike, ihe nkesa raara onwe ya nye bụ igwe ejikọrọ na thatntanetị nke nwere ike inye ụfọdụ ndị ọrụ ya ụdị ọrụ. Kama, nnabata na-ezo aka na ntanetị weebụ n'ime ihe nkesa. Dịka m kwuru na mbụ, n'ime ihe nkesa ahụ ọtụtụ njigide nwere ike ịnabata ma ọ bụrụ na akọrọ ya, maọbụ ọ bụrụ na raara onwe ya nye site na VPS.
Ugbu a, ụfọdụ ọrụ Comgwé ojii Comput ha dị oke oke, ma nwee ike ịnye ma nnabata na ọrụ ndị ọzọ: ịgbakọ, ịnọ iji sistemụ arụmọrụ yana ngwa, wdg. (lee IaaS, SaaS, PaaS, ...).
Mkpa nke mgbanwe dijitalụ
Tupu ọbịbịa nke SARS-CoV-2 oria ojoo, mgbanwe dijitalụ nke ụlọ ọrụ dị ezigbo mkpa. Ma mgbe Covid-19 gasịrị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị nhọrọ, mana ọrụ. Itinye teknụzụ ọhụụ na ọrụ nke azụmaahịa gị nwere ike belata ụgwọ ma melite uru.
Otu n'ime usoro izizi iji bido mgbanwe ahụ na azụmaahịa gị na-akwụghị ụgwọ, ma ọ bụ na SME gị, bụ ịmepụta weebụsaịtị wee chọta ebe obibi maka ya. Naanị ya ị ga-amalite ịgakwuru ndị niile ahụ na-erubeghị ugbu a ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị. Ma ọ bụ n'ihi na ha dịpụrụ adịpụ, ma ọ bụ n'ihi na ha enweghị ike ịga ntọala gị n'ihi mmachi.
Uru ndị ọzọ nke mgbanwe a gafere:
Can nwere ike ịnweta karịa data na onu ogugu gbasara ndị ahịa gị. Nke ahụ ga - enyere gị aka ịmatakwu ihe ha chọrọ, mee mkpebi ka mma, ma ọ bụ otu ị ga - esi mee ka atụmatụ ahịa gị ka mma.
Digitization kwa na-eme ka nhazi dị mfe nke azụmahịa. Nwere ike ijikwa azụmahịa gị n'ịntanetị site na iji ọtụtụ ngwaọrụ ngwanrọ na-arụ ọrụ ọtụtụ usoro, dị ka nyiwe e-commerce, ngwa ngwa, wdg.
Mgbanwe kachasị mma, ekele maka ezigbo oge nchịkọta data. Ikike a imeghachi omume dị oké mkpa n'oge ejighị n'aka ma ọ bụ ọnọdụ ndị dị ka nsogbu a.
Ọ na-enye ohere ịkọwasị ọrụ, ma na-eme ka ọ dị mfe telecommuting.
Mgbe ụfọdụ na-ezere inwe ọrụ site na mpaghara, yabụ weebụsaịtị nwere ike ịchekwaa mgbazinye nke ntọala, ụgwọ ọkụ eletrik, mmiri, arịa ụlọ, wdg. Nke a nwekwara mmetụta na ahịa, nke ga-adị asọmpi site na ịghara itinye ego ndị ahụ na oke uru.
Nnukwu iru nke azụmahịa gị. Ebe ọ bụ na tupu iru ụmụ amaala dị nso na azụmaahịa gị, ugbu a ị nwere ike iru ụwa dum.
Ọ ga - eme ka ụlọ ọrụ gị meziwanye ma ị ga - enwe ya ọtụtụ ndị ahịa nwere afọ ojuju na ọrụ.
ọzọ agility, na-ebelata usoro ọchịchị.
Inwe ihe nkesa raara onwe ya nye nwere ya uru na ọghọm, dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị kwuru na uru, ha pụtara:
Njikere: ekwesighi ịkekọrịta ihe onwunwe, igwe ahụ ga-arara gị nye. Nke ahụ na-enye nnwere onwe, ihe atụ, na ịrụ ọrụ dị elu.
Control: ị nwere ike ijikwa ihe nkesa dị ka ịchọrọ.
Nche: Site na ịkekọrịta akụrụngwa na ọrụ ndị ọzọ, ị ga-enwe ike ịnwe ụfọdụ egwu.
Mmezi: Sava raara onwe ya nye nwere mmezi dị mfe, ebe ọ bụ na sava na-akọrọ, ma ọ bụ VPS, dịtụ mgbagwoju anya.
Mgbanwe: ọ bụ ihe dịgasị iche iche, inwe ike ịrara oghere na akụrụngwa maka ihe ị chọrọ n'ezie, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nyiwe na ndị njikwa ọdịnaya. Nwere ike ịhọrọ usoro ihe nkesa na nnwere onwe ka ukwuu ...
Ọzọkwa nwere ọghọm ya:
Ahịa: ịbụ ndị raara onwe ha nye ha dị oke ọnụ karịa ndị nnabata ma ọ bụ sava VPS. Agbanyeghị, ọ bara uru n'ihi uru ha na-enye.
Ihe isi ike: ọ bụrụ na ị na-ejikwa sava zuru ezu, ị kwesịrị ịnwe ọzụzụ zuru oke. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọrụ igwe ojii na-arụkarị ọrụ nlekọta na nlekọta maka gị.
Yabụ m ga-ewe onye nkesa ihe nkesa?
Na mkpokọta, ọ bụrụ na ịchọrọ obere weebụsaịtị, blog, ma ọ bụ ihe yiri ya na obere okporo ụzọ, ị nweghị mkpa iku ihe nkesa raara onwe ya nye. N'aka nke ọzọ, sava raara onwe ha nye bụ nhọrọ kacha mma maka weebụsaịtị ọrụ, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na nyiwe ndị ọzọ nwere nnukwu ikike (nnukwu olu, ọnụ ọgụgụ dị elu nke nleta ma ọ bụ okporo ụzọ data dị elu,…).
Ọ dịkwa mma maka ọrụ ndị ahụ nwere ike ịmalite obere, mana nwere amụma iji too nke ukwuu. Nke a agaghị emepụta ihe mgbochi ogologo oge.
Otu esi ahọrọ ihe nkesa raara onwe ya nye
Ihe nkesa abụghị ihe ọzọ karịa a nnukwu ikike kọmputa. Yabụ, mgbe ịga ịhọrọ sava raara onwe ya nye, ị kwesịrị ịlele anya n'otu akụkụ ọrụaka ahụ dị ka mgbe ịzụrụ PC:
CPU- Servers na-enwekarị microprocessors, ya bụ, ọtụtụ isi chee. Formanrụ ọrụ ga-adabere na ha mgbe ha na-arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ na ngwanrọ nke akwadoro na ihe nkesa. Ya mere, ọ dị mkpa ka ha rụọ ọrụ nke ọma. N'ihe banyere VPS, ọ ga-abụ vCPU, ya bụ, CPU mebere.
Ebe nchekwa RAM: isi ihe nchekwa dịkwa mkpa, ịdị nkọ nke ihe niile na-agagharị ga-adabere na ya. Site na ncheta dị nwayọ, ịdị elu dị elu, ma ọ bụ ikike dị ala, CPU agaghị enwe ike ịrụ ọrụ ebube. Ego achọrọ ga-adabere nke ukwuu na ikpe ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ bụghị ndị ahịa niile chọrọ otu ihe.
Nchekwa: draịvụ ike bụ akụkụ ọzọ dị mkpa. Serversfọdụ sava raara onwe ha nye ka na-eji draịva ike magnet (HDDs), nke ga-adị nwayọ nwayọ, mana na-enwekarị ikike dị elu. Ndị ọzọ amalitela iji draịva siri ike (SSD), na nnukwu ọsọ ọsọ. Na mkpokọta, ị gaghị echegbu onwe gị maka ntụkwasị obi n'ọnọdụ ọ bụla, ebe ha na-eji sistemụ RAID. Ndị a ejighi oru usoro pụtara na ọ bụrụ na a disk ida, ọ ga-anọchi na-enweghị ọnwụ nke data.
Usoro njikwa: ọ nwere ike ịbụ Windows Server, ma ọ bụ ụfọdụ nkesa GNU / Linux. N'oge a na - adịghị ahụkebe ị nwekwara ike ịbanye n'ime sistemụ ndị ọzọ UNIX, dịka Solaris, * BSD, wdg. N'ihi ike ya, nchekwa na nkwụsi ike ya, Linux enweela ọtụtụ n'ime, na mgbakwunye na ịnwekwa nlekọta na nlekọta nchịkwa dị oke ala.
Nnyefe data- Na-ezo aka na oke data nke enwere ike ibufe ya na ntanetị netwọkụ nke sava ndị a. Ọ bụ ihe ndị na-enye ọrụ na-ejedebe na ụfọdụ ọrụ, ma ọ bụ na ha enweghị njedebe na ndị ọzọ dị oke ọnụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ekwesịrị ịhazigharị ya na ihe ịchọrọ maka nleta ma ọ bụ nnyefe nke ị ga-eme.
Ajụjụ ọzọ nke ahụ nwere ike ịmasị ị bụ ụdị njikwa ọ nwere, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ha nwere ike ịnye, dị ka ndebanye aha ngalaba, ọrụ email, ọdụ data, wdg.
Mkpa nke GDPR
'Ve nụla nke ọma GAIA-X, ihe na-adọrọ mmasị na Europe maka igwe ojii nke na-egbo mkpa nke Iwu nchekwa data Europe. Ihe dị mkpa ịkwanyere ikike nke nzuzo na ịchekwa data na mpaghara Europe (ma ọ bụ mebie nke ahụ, na ha na-agbaso GDPR).
Ọ bụrụ na nke a dị mkpa maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ ga-adị mkpa karịa mgbe ị na-ejikwa data dị nro na ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ndị ahịa ya. Nsogbu bụ na ịchọta ọrụ ndị na-agbaso iwu ndị a ma na-asọmpi siri ike. Ọbụna karị na-atụle oke mmetụta na ike nke ihe akpọrọ GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, na Microsoft).
Choo sava raara onwe ya nye na akwadoro ebe data dị na Europe, na ịsọ mpi adịghị mfe. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ Ikoula., Ọkachamara na nnabata webụ, sava raara onwe ya nye, na igwe ojii. Na mgbakwunye, ha nwere ahụmahụ dị ukwuu kemgbe 1998.
Ebe data gị ha nọ na france, na ọnọdụ abụọ na Reims na Eppes, yana Holland na Germany (yana USA na Singapore, mana ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị). Centers na-ekesịpde, na ịgbaziteghị plots dị ka itịbe na ụfọdụ ndị ọzọ ọrụ. Na mgbakwunye, o nwere ndị enyemaka na Netherlands na Spain. Na mgbakwunye, ha nwere ezigbo ọrụ enyemaka ọtụtụ asụsụ 24/7 dị n'aka gị.
n'etiti Ọrụ Ikoula kwụpụta:
correo electrónico ọkachamara na ngalaba weebụ nwe
Asambodo SSL / TLS maka nchekwa
Mfe ihu maka njikwa
E wezụga nke ahụ, ọ ga-amasị gị maka àgwà ndị ọzọ dị ka:
Jiri oghere emeghe na oru efu dị ka Kubernetes.
Bụrụ eco-anabata, inwe nkwanye ugwu na gburugburu ebe obibi site na iji 100% ume ọhụrụ n'ime ebe data ha (cheta na ebe data na-eri ike dị ukwuu, nke a dịkwa mkpa).
Ha na-akwado mbido, nke nwere ike ịbụ ezigbo mmụba ma ọ bụrụ na ị na-amalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Sava raara onwe ya nye: otu esi ahọrọ ihe ziri ezi maka ikpe gị
CrowdSec: ihe mmeghe na mmekorita cybersecurity maka Linux